GARBAHAAREEY ONLINE » TOP+NEWS: Gaas,Guuleed iyo Cosoble oo si isku mid ah uga hadlay Guusha uu gaaray Jawaari+(Fariina u diray)..
TOP+NEWS: Gaas,Guuleed iyo Cosoble oo si isku mid ah uga hadlay Guusha uu gaaray Jawaari+(Fariina u diray)..
Post Views = 1601
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya mudane Axmed Maxamed Islaam oo uu dhinac fadhiyo ku xigeenkiisa labaad cabdiqaadir Xaaji Maxamuud ayaa u hambalyeeyay Gudoomiyaha Cusub ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari.
Madaxweynuhu wuxuu xusay in shaqo wanaagsan oo dhinaca nidaamka dowliga ah ay qabteen xildhibaanada Cusub taas oo Soomaaliyada Cusub ku hagaysa wadada Dowladnimada.
Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in Gudoomiye Jawaari uu yahay nin Aqoon leh waxbadana kala socda Siyaasada Soomaaliya hagi karana Baarlamaanka 10aad ee Soomaaliya.
Madaxweynahu waxaa kale oo uu sheegay in sidaas si lamid ah looga baahan yahay Aqalka Sare in ay doortan dad wax gal ah oo la jaanqaadi kara Siyaasada Dalka.
Sidoo kale Madaxweynayaasha Dowlad Gobaleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa Guddoomiyaha dib loo soo doortay u rajeeyay Guul iyo hormar Afarta Sano ee soo socota ee uu hoggaamin doono Golaha Shacabka.
Maxamed Sheekh Cusmaan jawaari oo helay 141-cod Doorashadii maanta ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa wuxuu noqday Guddoomiyihii ugu horeeyay ee Baarlamaanka Soomaaliya oo labo mar oo isku xigta la doorto.